नेपालको विज्ञान विषयको शिक्षामा सामान्य हैन आमुल सुधारको आवश्यकता ! - नेपालको विज्ञान विषयको शिक्षामा सामान्य हैन आमुल सुधारको आवश्यकता !
नेपालको विज्ञान विषयको शिक्षामा सामान्य हैन आमुल सुधारको आवश्यकता !
२०७6, २ बैशाख, 02:14:40 PM
काठमाडौं । विज्ञान विषयको शिक्षा लिनु दिनुको उद्देश्य वैज्ञानिक उपलब्धिको सूचना हस्तान्तरण मात्र होइन । वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका सिद्धान्त रट्न लगाउनु पनि होइन ।
विद्यार्थीलाई प्रकृतिको तमास रहस्य प्रति जिज्ञासु बनाएर नयाँ सोच खोज र आविष्कारको लागि उत्प्रेरित गर्नु हो । तर हाम्रो देशमा दिँदै–लिँदै आएको विज्ञान शिक्षाले विज्ञान शिक्षाको उद्देश्य माथि नै उपहास गरेको छ । विज्ञानका विषयवस्तु आँखा चिम्लेर रन् लगाइएको छ । परिभाषा कारण देउ, तथ्य तथ्यांक रटाउने र परिक्षामा खरर लेख्न सक्ने बनाउनुलाई विज्ञानको पढाई भनिएको छ । विज्ञानप्रतिको यो जत्तिको बेइमानी अरु देशमा भेटिन्न ।
हाम्रो देशको अधिकांश स्कुल चाहे ती सरकारी हुन् वा निजीमा आवश्यक पर्र्ने विज्ञान प्रयोगशाला छैनन्, भएका ठाउँमा काम चलाउनुका लागि छन् । ती प्रयोगशालालाई विद्यार्थीलाई अनुसन्धान गर्र्ने गरी प्रयोगमा आएका छैनन् । प्रयोगशालामा काम गर्नुको उद्देश्य विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक परीक्षामा गर्न सक्ने बनाउने भन्ने सानो कुरामा सीमित छ ।
सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीले प्रयोगशालाको मुख देख्न नपाई विद्यालय तह पूरा गरेका निजी स्कुलमा एक पटक प्रयोगशालाको अनुहार नदेखेको विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कक्षाको पूर्णांकमा २५ नै ल्याएका हुन्छन् । प्रयोगशालाको कोठा नै नभएका निजी स्कुलमा समेत प्रयोगशाला शुल्क भनेर लिइराखेका छन् ।
विद्यालय तहमा विज्ञान पाठ्यक्रमले तोकेको विषय वस्तु पनि धेरै अर्थहीन खालका छन् । कति प्रयोग गरेर देखाउन समेत असम्भव हुने खालका छन् । कतिपय विद्यालय तहका विद्यार्थीका लागि बुभ्mन कठिन हुने समेत कक्षा १० सम्म विज्ञान शिक्षालाई अनिवार्य विषयको रुपमा राखिएको सन्दर्भमा त्यस्ता गाह्रो खालको विषयवस्तु भिन्न भिन्न क्षमता र रुचि भएका विद्यार्थीलाई अनुपयुक्त भएको छ ।
यसको धेरै विद्यालयका लागि विज्ञान विषय बोझिलो र गाह्रो लाग्ने गर्छ । यसकारण त्यस विज्ञान विषयलाई आधारभूत तहबाट अनिवार्य गराएर कक्षा ९ देखि छनोटको विषयका रुपमा राख्नु वैज्ञानिक हुन्छ ।
अन्यथा घोक्न नसक्ने विद्यार्थीलाई जबरजस्ती घोक्न लगाएर बल्ल बल्ल सि वा डी ग्रेड ल्याउने बनाइदिएको कुनै अर्थ देखिँदैन । यसले उल्टो ती विद्यार्थीहरुका अन्य सम्भावनालाई भत्काइ दिएको छ ।
स्कुले विज्ञान शिक्षामा न त प्रयाप्त प्रयोगात्मक कक्षा हुन्छन् न विषयवस्तुको प्रत्यक्ष महशुस गराउनु फिल्ड ट्रिप नै कक्षाको चौघेराभित्र वैज्ञानिकता सिद्धान्त रटाएर विद्यार्थीलाई पुंर्ण बनाउने काम मात्रै गरेको छ ।
यसको परिणाम हरेक वर्ष विज्ञानको तीन क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कार दिने गरिन्छ तर आजका दिनसम्म एउटै नेपाली नोबेल जितन योग्य भएको छैन र यसको स्पष्ट संकेत हो । नेपालको विज्ञान विषयको शिक्षा समान्य हैन । आमूल सुधारको आवश्यक छ ।
विद्यालय तहमा विज्ञानको पाठ्यक्रम टन्न राखिएको छ । जो वर्ष भरी पढाएर सक्न हम्मेहम्मे पर्छ । त्यसमाथि प्रयोगात्मक कक्षा, प्रोजेक्टर तथा फिल्डमा लैजाने हो भने त्यसको एक तिहाई कोर्स ठिक हुन्छ अतः विज्ञानको कोर्सलाई एक तिहासमा झारेर महत्वपूर्ण विषयवस्तु समेट्दै विज्ञान विषयको वैज्ञानिक शिक्षण प्रणाली अवलम्बन गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
त्यस्तै विश्वविद्यालयको विज्ञान शिक्षामा नयाँ अपडेट छैन । अपडेटका लागि विश्वमा भइरहेका प्रगतिको अध्ययन गरिरहने जनशक्ति छैन । कुनै बेला विश्वविद्यालयले बनाएको पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर पढाउन सुरु गरेको वर्षौं भइसक्यो ।
नयाँ प्रविधिमैत्री अनुसन्धानमुखी र प्रभावकारी प्रयोगशाला छैन । केवल समय सकाउनुमा मात्रै सीमित छ । विश्व विद्यालयको शैक्षिक नीति मात्रै बनाएर पुग्दैन । त्यो नीतिले विश्व विद्यालयलाई फाइदा हुने गरी होइन, कसरी उत्कृष्ट शिक्षा दिने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
आप्mनो नीति नियम बारे सरकार सँग मिलेर उत्पादनलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । तसर्थ उत्कृष्ट विश्वविद्यालय कोठे बहसबाट होइन बौद्धिक प्राध्यापकबाट निस्कनु जरुरी छ । हामी कहाँ भने नेतृत्वमा बसेका आपूm र राजनीतिज्ञका स्वार्थ हुने नहुने कुरालाई आधार मानेर बसेर कुरा गर्छन् । त्यसैले गर्दा नेपाली विज्ञानको पछाडि कमजोर हुँदै गएको छ ।
जसका कारण वैज्ञानिक, शिक्षा र विज्ञानको परीक्षा वा मूल्यांकन प्रणालीमाथि पनि पुनः विचार गर्नु पर्नेछ र आजको जस्तो विद्यार्थीले परिभाषा घोकेर सिद्धान्त रटाउने जस्ता जुन कठित परीक्षा प्रणाली अपनाएको छ ।
यसमाथि परिर्वत आउनु जरुरी छ । जसका कारण अरु देशका वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका सिद्धान्तहरु भिषण रटान चलिरहेका छन् । विद्यार्थीले विषयवस्तुलाई कतिको गहिराई सम्म बुझे भन्ने जाँच्न मिल्ने गरी प्रश्नपत्र तयार गर्नुपर्छ ।
सँगै, प्रोजेक्ट वर्क, नयाँ खोजको लागि होम्याउने गरी मूल्यांकन प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । तब मात्र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने भोलिका वैज्ञानिक उत्पादन हुन सक्छन । अनि नयाँ आविष्कार गरेर विश्ले नेपाललाई लगाएको गुण तिर्न सक्नेछ ।
लेखक चन्द वन्यजन्तु अनुसन्धानकर्ता हुन् ।